China China factory 5052 PVDF miloko mifono coil aluminium 0.7mm mpanamboatra sy mpamatsy | Huifeng
Coil aluminium mifono loko
China factory 5052 loko PVDF mifono coil aluminium 0,7mm matevina
Ny alim-borona mifono loko (coil aluminium mifono loko), aliminioma mifono loko polyester (coil aluminium mifono loko), dia be mpampiasa amin'ny takelaka tantely tantely, valindrihana alimina, tampon-trano ary fitaovana sisa tavela. Milamina tokoa ny zava-bitany, ary tsy mora simbaina izy io. Karazan-fitaovana vaovao.
Ny fitaovana ampiasain'ny vokatra aerospace, fiaramanidina, fandefasana, indostria simika, fitaterana, elektronika ary herinaratra, indrindra ireo vokatra ireo dia afaka mameno ny banga ao amin'ny tsenan'i Shina miaraka amin'ny halehibeazany, firavaka avo lenta sy marina Al.
Famaritana ny coil aluminium
Laharana firaka: 1060, 1070, 1100, 2A12, 2024, 3003,3004, 3105, 5052, 5083, 5754, 6061, 6063, 6082, 7075 sns
Tempera: H32 H24 H16 H18 O H111 H112 T3 T351 T4 T42 T6 T651
Ny sakany DC: 100-2600mm
Ny sakany CC 100-1700mm
Fitsaboana ambonin'ny tany: famaranana, fametahana, fanodinana loko, famolahana loko, famolahana
Ny fonosana coil aluminium mifono loko dia mizara ho: coil aluminium vita amin'ny polyester (PE), coil aluminium mifangaro fluorocarbon (PVDF). Ny firakotra polyester namboarina tamin'ny fanaingoana ny tampon'ny takelaka aluminium nandritra ny fotoana maro dia mety hamorona firaiketam-po mitohy sy hentitra. Ny horonantsary mafy orina dia manana fiarovana haingon-trano fiarovana. Izy io dia coating manohitra UV. Ny resina polyester dia mampiasa ny polymôleôlôlika ambony misy estera mifatotra amin'ny rojo lehibe ho monomer, ary ny resina alkyd dia nampiana. Ny mpitroka ultraviolet dia azo zaraina ho andiany ambany-gloss sy gloss avo lenta araka ny gloss. Izy io dia afaka mizara loko manankarena amin'ny vokatra aliminioma miloko, ary manana gloss sy malama tsara, ary koa ny endrika sy fahatsapana ambonimbony, ary koa afaka mampitombo ny fahatsapana layering sy ny lafiny telo. Izy io dia afaka miaro ny zavatra tsy ho tratry ny atmosfera ary hanafika ny taratra ultraviolet, ny rivotra, ny orana, ny fanala, ny lanezy ary ny hatsiaka; ny paty dia afaka mitana andraikitra fiarovana noho ny tsy fitovian'ny maripana, ny tsingerin'ny hatsiaka, ny gazy manimba ary ny zavamiaina bitika. Tena mety amin'ny haingon-trano anatiny sy ny birao fanaovana dokam-barotra
Fluorocarbon mifono loko mifono Aluminium Coil (PVDF)
Fluorocarbon coating dia resin ny PVDF resahina indrindra amin'ny firakotra ny vinylidene fluoride homopolymer na copolymer of vinylidene fluoride ary habe hafa amin'ireo monomérine vinyl misy fluorine. Ny firafitry ny simika amin'ny asidra fluorika dia mitambatra amin'ny fatorana fluorine / carbon. Ny fahamarinan-toerana sy ny fiorenan'ny firafitry ny simika io dia mampiavaka ny firafitry ny fluorocarbon amin'ny endriny ara-batana amin'ny fahasamihafana mahazatra. Ho fanampin'ny toetra mekanika ny fanoherana ny akanjo, ny fanoherana ny fiatraikany dia manana fahombiazana tena tsara, indrindra amin'ny toetr'andro sy ny tontolo iainana masiaka dia mampiseho fanoherana maharitra, fanoherana anti-ultraviolet. Rehefa avy natsatsika tamin'ny hafanana ambony hamoronana sarimihetsika, ny firafitry ny molekiola ao anaty fonosana dia tery ary manana fanoherana mahery vaika. Ny firakotra fluorocarbon dia azo zaraina ho fomban-drazana fluorocarbon sy nano fluorocarbon arakaraka ny firafitry ny fananganana sary mihetsika.
Ny coil aluminium mifono loko dia manana loko marobe, na ho an'ny trano onenana sivily, toeram-pivarotana lehibe na ivon-fampirantiana marobe, ny coil aluminium mifono loko dia afaka manampy loko ao aminy. Ny fananana plastika sy milina tsara dia tsara ary tsara ho an'ny endrika maritrano isan-karazany. Ny kofehy vita amin'ny alim-baravarana vita amin'ny loko dia nanome arititra, mpamorona ary tompony manana habaka miloko manokana ho an'ny rindrina ivelany sy ny valindrihana, ary izy ireo koa no fitaovana mety indrindra amin'ny maodelin'ny maritrano. Na tranobe midadasika misy fampiasa maro na trano vaovao-tsy manam-paharoa sy mamorona, ny coil aluminium mifono loko dia afaka mamaly hatrany ny takiana samihafa amin'ny fomba maoderina sy klasika amin'ny maritrano, ka mahatonga ny trano ho maro loko kokoa. Ny vokatra dia ampiasaina amin'ny sehatra maro toy ny fitaovana elektronika, fitaovana, jiro, fonosana, haingon-trano sy ny sisa.
Mampiasa marobe ny vokatra: fananganana (tontonana vita amin'ny aliminioma, tantely tantely alimo, birao mitafo tampontrano, veneer fireproof, valindrihana aliminioma, vavahady, varavarana mihodina, varavarana garazy, kofehy, fantsom-bokatra latsaka), fitaovana elektronika (tariby solosaina, tontonana elektrika), Jiro, fanaka, taratry ny masoandro, fantsom-panaingoana rivotra sns.
Teo aloha: Volom-bolo vita amin'ny metaly mitafo takelaka vita amin'ny alimika vita amin'ny takelaka vita amin'ny alimo
Manaraka: Tsara laza extruded firaka 6061 6082 5083 2024 7075 boribory aluminium bar
Coil aluminium mifono PE
Coil aluminium aluminium
Aluminium esory / coil 1000series, 3000series, 50 ...